Ndị a bụ ọdịiche dị n'etiti Apple Watch Series 2 ọhụrụ na Apple Watch Series 1 | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ ọdịiche dị n'etiti Apple Watch Series 2 ọhụrụ na Apple Watch Series 1
Villamandos | | Apple, smartwatch
Fewbọchị ole na ole gara aga, Apple gosipụtara ọhụrụ iPhone 7, nke enwere ike zụta ugbu a n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Yana ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ nke ndị si Cupertino, the Apple Watch Series 2, nke abụọ nke Apple Watch a ma ama nke anyị niile tụkwasịrị obi na nke o mere ka anyị nwetụrụ iche n’ihi ntakịrị mmezi ole na ole.
Ikekwe nke a bụ otu n'ime ihe kpatara ụlọ ọrụ Tim Cook ji agba ọsọ ewepụtala aha dị iche maka ngwaọrụ ọhụrụ ya site na uwe aka ya, na-agbanwekwa aha nke mbụ. Seconddị nke abụọ nke Apple Watch a na-akpọ Apple Watch Series 2 ugbu a, na-edegharị aha ihe atụ mbụ na aha Apple Watch Series 1. Echefula aha a, iji zere nsogbu. Hapu ihe di iche n’etiti ha n’aka anyi n’ihi n’isiokwu a anyi ga agwa gi ihe nile banyere ha.
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ n'etiti ịzụta ihe mbụ Apple Watch ma ọ bụ Apple Watch Series 2, closeaa ntị nke ọma na isiokwu a n'ihi na ọ nwere ike ọ gaghị akwụghachi gị ụgwọ iji ego euro ole na ole na ụdị ọhụrụ nke Apple werarable mgbe ụdị mbụ ga-ahapụ gị ka afọ ju.
1 Kedu ihe dị iche n'etiti Apple Watch Series 2 na Apple Watch Series 1?
2 Ndị a bụ myirịta ...
Kedu ihe dị iche n'etiti Apple Watch Series 2 na Apple Watch Series 1?
Ọ bụrụ na anyị etinye ngwaọrụ abụọ ahụ na tebụl ma jiri ya tụnyere ha, ọ ga-abụ na anyị agaghị ahụ ọdịiche ọ bụla na ọkwa nhazi ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị agbanye ha anyị nwere ike ịghọta nke ahụ dịka ọmụmaatụ Ihuenyo Apple Watch Series 2 na-enwu gbaa ekele nke 1.000 hits nke ewute ọ nwere. Nke a ga - enyere anyị aka ilebanye anya na ntanetị karịa na ọnọdụ dị mma.
N'ime Apple Watch ọhụrụ anyị hụrụ a dual-core processor nke ga-enye anyị nnukwu ọsọ ruo 50% onye nke Apple Watch Series nyere 1. Ọ bụghị na ụdị mbụ nke Apple Watch chọrọ ike karịa, mana enweghị usoro ọrụ ka mma ma dị ike.
Ngwakọta nke GPS, nke anyị na-atụ uche nke ukwuu na Apple Watch Series 1 bụ otu n'ime ihe ndị ọhụrụ banyere ụdị nke abụọ nke Apple Watch. Nke a ga - aba oke uru maka ndị egwuregwu nwere ike ịpụ na smartwatch ha, na - enwe ihe ọ bụla ha na - achịkwa site na Apple Watch Series 2.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ileghara ya anya asambodo nke Apple Watch ohuru nwetara, nke ga - eme ka anyi banye n'ime ya na-enweghị egwu ọ bụla. Apple Watch Series 1 enweghị ike ịbanye, na nkwenye nke Apple, nke mgbe obere oge gosipụtara na ọ na-eguzogide ọgwụ naanị. Site na Apple Watch Series 2 anyị nwere ike ịsa ahụ, saa ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ma ọ kwadokwa maka ndị na-egwu mmiri bụ ndị nwere ike ijikwa mgbatị ha na ngwaọrụ ahụ.
Ndị a bụ myirịta ...
Hapụ obere mmezi nke Apple webatara na Apple Watch Series 2 yana nke anyị enyochaworị, anyị ga-ekwupụta nke ahụ abụọ nsụgharị nke Apple Watch anya yiri nnọọ.
Ma obu na anyi ahughi ihe di iche na usoro, ma obu nha na ibu. Ihe nhazi ohuru nke anyi huru na ohuru nke Apple Watch agagh adi ihe di iche ma obu na n’ime izu ole na ole anyi g’enwe ike ihu ihe nhazi ahu na Apple Watch Series 1.
Ndụ batrị ga-abụ otu ihe ahụ na smartwatches abụọ ahụ ebe ọ bụ na ha ga-abụ otu na-enye anyị otu nnwere onwe. Banyere ngwanrọ ahụ, ha ga-adịkwa ka nke ahụ bụ na ụdị sọftụwia na-adịbeghị anya nke Apple wepụtara ga-anọ na Apple Watch Series 1 na Apple Watch Series 2.
Ọbịbịa nke Apple Watch Series 2 na ahịa emeela ka ọnụahịa nke Apple Watch Series 1 gbadata nke ukwuu. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ọnụahịa nke nsụgharị abụọ ahụ;
38mm Egwuregwu Aluminium Grey:: 339
42mm Egwuregwu Aluminium Grey:: 369
38mm Egwuregwu Aluminom Rose Gold: € 339
42mm Egwuregwu Aluminom Rose Gold: € 369
38mm Egwuregwu Aluminom Aluminom: € 339
42mm Egwuregwu Aluminom Aluminom: € 369
38m Egwuregwu Aluminom: € 339
42mm Egwuregwu Aluminom Silver: € 369
38mm aluminom: site na € 439
42mm aluminom: site na € 469
38mm ígwè: site na € 669
42mm ígwè: site na € 719
Efere: site na € 1.469
Jiri obi ebere Enwere m oge siri ike ịghọta ngagharị nke Apple mere site na mwepụta nke Apple Watch Series 2 Ma ọ bụ na ndị nke Cupertino enyela anyị ngwaọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke anyị nwere na ahịa, yana ụfọdụ ihe ọhụụ na-enweghị nnukwu mkpa yana nke na-emelite ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ.
Site na mwepụta nke Apple Watch ọhụrụ, ọ na-esiri m ike ịghọta na onye ọrụ ọ bụla nwere Apple Watch Series 1 na-ebupụta ịzụta smartwatch ọhụrụ ahụ, agbanyeghị etu esi eguzogide mmiri ma ọ bụ n'ihi itinye GPS. Na onye ọrụ nke na-atụba onwe ya n'ịzụrụ Apple smart watch, ikekwe akụkọ nke ụdị ọhụrụ ahụ adịghị mkpa ya obere ma ọ bụrụ na ọ na-echekwa ịchekwa euro 100 na enwere ọdịiche dị n'etiti otu ngwaọrụ na nke ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere Apple Watch Series 1, echere m na ikwesighi ọbụna tụlee nhọrọ nke ịzụta Apple Watch Series 2 ọhụrụỌ gwụla ma ị nyere ezigbo ntinye aka na ngwaọrụ ị nwere ugbu a ma ọ bụ chọrọ ngwa ngwa ụfọdụ akụkọ ndị ọhụrụ ụdị Apple Watch nwere. Ọ bụrụ na ịnweghị smartwatch na ị na-eche echiche ịnweta nke Cupertino, ị kwesịrị ịlele ma ị ga-ahọrọ ụdị nke ochie ma ọ bụ nke ọhụụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke yiri 100 euro karịa.
Ì chere na Apple amalitela ọhụụ ọhụrụ nke Apple Watch na ahịa nke yiri nke ahụ dị na ahịa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ, na-achọ isoro gị kwurịta nke a na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ndị a bụ ọdịiche dị n'etiti Apple Watch Series 2 ọhụrụ na Apple Watch Series 1
Mana ọ bụrụ 100 euro, ihe dị iche ga-abụrịrị ihe ezi uche dị na ya na nke ọma iji mee mkpesa maka 100 euro. Otu karama 2005 pingus na-efu euro 900 ị na-a drinkụ ya n'ime ọkara elekere.
Fọrọ nke nta yiri version ?? GPS na mmiri na-eguzogide?
Ndi eriri igwe (ma obu ndi agha dika amara ha ebe ozo) dakọtara na usoro 1 na usoro 2?
WhatsApp emelitere na ọ bụ omume ugbu a iji zipu ozi site na iji Siri
Nvidia na-etinye aka na ọgụgụ isi na Tesla P40 na Tesla P4 GPUs